ရိဒ်ရေကန် - ဝီကီပီးဒီးယား
23°20′24″N 93°23′06″E﻿ / ﻿23.340°N 93.385°E﻿ / 23.340; 93.385ကိုဩဒိနိတ်: 23°20′24″N 93°23′06″E﻿ / ﻿23.340°N 93.385°E﻿ / 23.340; 93.385
၁ mi (၁.၆ km)
၀.၅ mi (၀.၈၀ km)
ရိဒ်ရေကန် (အင်္ဂလိပ်: Rih Lake; အင်္ဂလိပ် အသံထွက်: /rìʔ/ ) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ဖလမ်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည့် အသည်းပုံသဏ္ဌာန် ရေကန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
၃ ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် အနေအထား
၄ ဒဏ္ဍာရီဆန်သော ဖြစ်တည်မှုသမိုင်း
၅ ရိုးရာစစ်ချီတေးမှလာသော သမိုင်း
၆ ချင်းလူမျိုးတို့၏ ယုံကြည်မှု
ရိဒ်ရေကန်ကြီး၏ တည်နေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက် မြောက်ဖက်ဒေသ၊ ချင်းပြည်နယ်၏ အနောက်မြောက်ဖက် အစွန်းတွင် တည်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယ - မြန်မာ နယ်စပ် နှင့်ပို၍ နီးသည်။ နယ်စပ် မျဉ်းနှင် ၂ မိုင်သာဝေးသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေပေါင်း ၂၉၆၆ပေအမြင့်တွင် ထူးခြားစွာဖြစ်ပေါ်နေသော ရေကန်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက် ကြံဖိုင်းမြို့ နှင့် မိုင် (၂၀) ဝေးပြီး မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရှိ မြို့တော် အိုက်ဇောနှင့်လည်း မိုင်(၁၃၀) သာဝေးသည်။ သို့အတွက် ရိဒ်ရေကန်ကြီးသို့ လာရောက် လည်ပတ် သူများမှာလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘက်မှသာ များသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကလေးမြို့မှ တစ်ဆင့် ချင်းတောင်တန်းကြီး၏ အမြင့်ဆုံးနေရာဖြစ်သော ကနေဒီတောင် (၈၈၇၀) ပေအမြင့်ကို အဆင့်ဆင့်ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ မိုင် (၆၀) နီးပါးဝေးသော တီးတိန်မြို့ကို ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ တီးတိန်မြို့မှတဆင့် မဏိပူရမြစ်ကို ဖြတ်ကျော်ဆောက်လုပ်ထားသည့် မံဆောင်းကြိုးတံတားကို ဖြတ်သန်းသွားကာ တီးတိန်မြို့မှ (၃၂) မိုင်ခန့်အကွာရှိ ရိဒ်ရေကန် (Rih Lake) ရှိသော ရိဒ်ခေါဒါရ်မြို့ကလေးကို ရောက်ရှိနိုင်သည်။
ရိဒ်ရေကန်သို့ အများဆုံး လာရောက်ကြသည်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ထိုသို့ အလာများရသည်မှာ "၎င်းတို့၏ ဆွေမျိုး သားချင်းများ၏ ဝိညာဉ်များသည်လည်း ရိဒ်ရေကန်ကြီးတွင် လာရောက်မှီခိုနေထိုင်ကြသည်" ဟူသော အယူအဆ တစ်ရပ် အရ အထွတ်အမြတ်ထားရာ နေရာအဖြစ် လာရောက် ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ယခုအခါတွင်တော့ ရိဒ်ရေကန်ကြီးအတွင်း အပျော်စီးလှေများ စီးနင်းနိုင်အောင် စီစဉ် ပေးထားခြင်းနှင့် ညအိပ် တန်းခိုနိုင် ရန်ပင် ဘန်ဂလိုများ စီစဉ်ပေးထား ခြင်းတို့ကြောင့် ရိဒ်ရေကန်ကြီးမှာ အပျော်စီး လှေလာရောက် စီးနင်းသည့် တောင်ပေါ် သားများနှင့် ပျားရည်ဆန်း ခရီးထွက်သူများ ဖြင့်ပါ စည်ကားနေ လေ့ရှိပေသည်။
ထိုမျှ ဒဏ္ဍာရီဆန်သော အတိတ်သမိုင်းများ ၊ ဆန်းပြားသော ယုံကြည်ချက်များနှင့် ထူးခြားချက်များနှင့် ပြည့်နှက်နေသော ရိဒ်ရေကန်ကြီးမှာ ပတ်လည် အကျယ် ၂.၅ မိုင်ရှိသော တောင်ပေါ် ရေကန်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုပတ်လည် အနားတစ်လျှောက်တွင်လည်း ဒေသခံတို့ကဝိညာဉ်ခြံစည်းရိုးပင် ဟုခေါ်ဆိုကြသည့် မိုးမခပင်များက ခြံစည်းရိုး ရှည်ကြီးသဖွယ် သဘာဝ အလျောက် စီတန်းကာ ပေါက်ရောက် နေပြန်ရာ အဆိုပါ မိုးမခ ပင်တန်းကြီးကို ချင်းလူမျိုးတို့က (၎င်းတို့၏ ယုံကြည် ချက်အရ ဝိညာဉ် ခြံစည်း ရိုးဟု ကင်ပွန်း တတ်ထားကြ လေသည်။) အိုင်၏ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ၈၃၂ ဧက ရှိသည်။ ကန်အတွင်း ရေပြင်၏ ပျှမ်းမျှ အနက်မှာပေ (၅၀) ရှိပြီးအနက်ဆုံး နေရာများ တွင်မူ ပေ (၆၀) အထိ ရှိသည်။ ရေအရောင်မှာ ပြာလဲ့လဲ့ရှိပြီး ကန်အတွင်းတွင် ကြာဖြူ ၊ ကြာနီ နှင့် ဗေဒါများ ဖူးပွင့်နေလေ့ရှိသည်။ အလားတူပင် ရေကန်ပတ်လည်ရှိ မိုးမခပင်များ ထက်တွင် လည်း သစ်ခွပင်များ ပေါက် ရောက်နေပြန်ရာ ရိဒ်ရေကန်ကြီးမှာ တောင်ပေါ်ဒေသမှ စာပန်းချီခြယ်သ မကုန်နိုင်သည့် ရှုခင်းကြီး တစ်ခုသဖွယ် ဖြစ်နေ ပါတော့သည်။
ရိဒ်ရေကန်ကြီး၏ ဖြစ်တည်မှု သမိုင်းကား အလွန်ပင် ဒဏ္ဍာရီဆန်လှသည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့ ဒဏ္ဍာရီ ဆန်လွန်းလှသည့်တိုင် အဆိုပါ ဖြစ်တည်မှု သမိုင်းကို တော့ ချင်းလူမျိုးတို့က ယနေ့တိုင် အခိုင်အမာ ယုံကြည်နေ ကြဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဖြစ်တည်မှု ဒဏ္ဍာရီကြီး၏ အစကား လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ငါးရာကျော် ၊ ခြောက်ရာ နီးပါး ကာလ၊ မီဇို ချင်းလူမျိုးတို့၏ အခြေချ နေထိုင် ခဲ့သည့် အချိန်မှ ပင်ဖြစ်ပေသည်။ ချင်းအနွယ်ဝင် မီဇိုလူမျိုးနှင့် ဟွာလ်ငိုး (Hualngo) နွယ်ဝင် တို့သည် ၁၄၅၀ ခုနှစ်ခန့် မှစတင်၍ ချင်းတောင်တန်း ပေါ်တွင် မြို့ပြ တည်ထောင်ကာ အခြေချ နေထိုင် ခဲ့ကြသည်။ ဤ သို့နေထိုင် လာခဲ့ရာမှ တစ်နေ့သော အခါတွင်မူ ဒုတိယမြောက် ဆွေးပွီးမြို့သူကြီး ဟွာထန် (Huathana) သည် အိပ်မက်တစ်ခုအား မြင်မက်လေတော့သည်။ ယင်း အိပ်မက်တွင် မုတ်ဆိတ်မွေး ဖားဖားနှင့် အလွန်တရာမှပင် ကျက် သရေ ရှိလှသော နတ်မင်းကြီး တစ်ပါးက ဟွာလ်ထန်အား ကိုယ်ရောင်ပြပြီး " ငါသည် ဝိညာဉ်စောင့်နတ်မင်းကြီး ပူးရိဒ် ဖြစ်ပေသည်။ သင်တို့၏ ဝိညာဉ်များ အားစောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာ ငါသည် နွားနောက်ဖြူ အသွင်ဖန်ဆင်းကာ ကောင်းကင် ခရီး ဖြင့်လာခဲ့ရာ သင်တို့၏ သင်တို့အရပ်၏ အနောက် မြောက်ဖက်ခရီး အတန်ငယ်ဝေးသော နေရာတွင် နေရာတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပေသည်။ ငါသည် ထိုနေရာ၌ စံစားနေထိုင်ရန် အလို့ငှာ ထိုနေရာအား လူတို့၏ အသည်းနှလုံးပုံ တိတိကျကျ ရှိသော ရေအိုင်ကြီးတစ်ခု အဖြစ်ဖန်ဆင်းလိုက်ပေသည်။ ထိုရေအိုင်ကြီး တွင်ယနေ့မှ စ၍ ငါကိုယ်တော်စံစားမည် ဖြစ်သလို .. သေသောသူအားလုံးတို့၏ ဝိညာဉ်များသည်လည်း မဖြစ်မနေ ငါထံသို့ လာကြရပေမည် " ပြောဆိုမိန့်ကြားသွားခဲ့လေသည်။ ထိုအိပ်မက်အရ ဟွာလ်ထန်သည် သူ၏ မူးမတ်များအား လွှတ်၍ ရေအိုင်ကြီးကို ရှာဖွေစေခဲ့ရာ ခုနှစ်ရက်တိတိ ပြည့်မြောက်သော နေ့မှာပင် ထိုရေအိုင်ကြီးအား တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ယင်းသို့တွေ့ရှိချိန်မှ အစပြု၍ ထိုရေကန်ကြီးအား ရိဒ်ရေကန် (RIH-DIL) ဟုခေါ်ဆို ကြလေသည်။ ရိဒ်ဆိုသည်မှာ ရိဒ်နတ်မင်းကြီးအား ကိုယ်စားပြုပြီး (DIL) မှာရေကန်ဟု အဓိပ္ပါယ် ရလေသည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ ရိဒ်နတ်မင်းစံစားရာ ရေအိုင်ပင်ဖြစ်လေသည်။
ရိဒ်ရေကန်နှင့်ပက်သက်သော အထက်ပါပုံပြင်သည် နောက်မှဖြစ်လာသည့် ဒဏ္ဍာရီပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယနေ့တိုင် သီဆိုလျက်ရှိနေသေးသော ရိုးရာစစ်ချီတေးအရ၊ "ရိဒ်" ဟူသော ဝေါဟာရသည် "သျှရိ" ဟူသော စကားမှရွှေ့လျော့လာခြင်းပင်။ ယနေ့တွင် ချင်း (ဇိုမီး) ဟုတွင်သောတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရှေးဘိုးဘေးများ၊ ဤဒေသ၌စတင်အခြေချစကာလတွင် အဝေးမှကြည့်လျှင် နွားနောက်ဦးချိူပုံပေါက်နေသည်ကို အကြောင်းပြုလျက် "ရှာလ်ကီးဒူလ်" ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သမိုင်းတင်ထင်ရှားသောပုရောဟိတ် ဂါလ်ငါမ်ကို အစွဲပြုလျက် "ဂါလ်ငါမ်သွီးလီ" ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မိုဃ်းကျရေပြင်ဟုဆိုလိုသည့် "ဗန်ကဲ့သွီးလီ" ဟူ၍လည်းကောင်း အသီးသီးခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ဂွီးသဲနယ် တောင်ပိုင်မင်းကြီးမာန်ဆူမ်း၏ ညီတော်ထွေး၏ အမွေပိုင်မြေအစိပ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဤဒေသတွင် အခြေချကြပြီး မျိူးဆက်နှစ်ဆက်အလွန်တွင် မြစ်ညှာဖက်မှ မျက်နှာမည်း (ဘင်္ဂလီကုလားများဖြစ်တန်ရာ၏) များသည် တိုင်အိုချောင်းရိုးအတိုင်း စုန်ဆင်းလာပြီး၊ ဤရေကန်၏ ပတ်ပတ်လည်လည်တွင် တောင်ယာခုတ်လျက်၊ ကျောက်ထရံများကို (ရဲတိုက်ကဲ့သို့) တည်ဆောက်လျက် အခိုင်အမာ အခြေချနေထိုင်လာကြသည်။ ရေကန်ကိုလည်း "သျှရိ" ဟုသမုတ်လျက်၊ နတ်စင်တင်ပူဇော်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဂွီးသဲနယ်တောင်ပိုင်မင်းကြီး မာန်ဆူမ်းက အခွန်တော်ပေးပို့ရန် အကြိမ်ကြိမ်ရာဇသံပေးပို့ရာ၊ နာခံခြင်းမရှိရုံမျှမက ၎င်းကာလ ဂွီးသဲနယ်၏ အိမ်တော်နန်းစိုက်ရာ ကျိမ်နွဲမြို့၏ ခံတပ်မြို့တခုဖြစ်သော ဂဲလ်သွီးကို ထိပါးလာကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ "တောင်စဉ်သုံးခုပိုင် ဂွီးသဲမင်းညီနောင်သုံးဖော် (Mualthum Kampau Guite Unau Thum)" ဟုထင်ရှားသော နောင်တော် ကျိမ်နွဲစား မာန်ဆူမ်း၊ ညီတော် သွဲ့ယွဲ-ဗန်းတဲ့စား ကူလ်ဂင်း (သူ၏သားတော် ဂင်းဒုန့်) နှင့် ညီတော်ထွေး လဲင်းတောင်စား နာ့ဆားဝ် (ကူလ်လိုင်)တို့သည် တပ်ပေါင်းစုကို စီစဉ်၍၊ ၎င်းမျက်နှာမည်းတို့အား တိုင်အိုမြစ်၏အနောက်ဖက်သို့ တိုက်ထုတ်ချေမှူန်းခဲ့ကြသည်။ ၎င်းစစ်ဆင်ရေးတွင် သွဲ့ယွဲ-ဗန်းတဲ့စား ကူလ်ဂင်း၏ ဒုတိယသားတော် (အိမ်ရှေ့စံ ဂင်းဒုန်၏ညီတော်) ဇွန်ဟောက်၊ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်တွင် တိုက်ပွဲကျအသက်စတေးခဲ့သည်။ ၎င်းကို အမှတ်ပြု ရေးစပ်သော စစ်ချီတေးကို ဗန်းတဲ့ရွာတွင် ရိုးရာပွဲများကျင်းပတိုင်း သီဆိုလေ့ရှိကြသည်မှာ ယနေ့တိုင်ဖြစ်လေသည်။
ရိဒ်ရေကန်ကြီးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မီးဇိုချင်းများက လူတစ်ယောက် သေဆုံးသွားသည့် အခါတွင် ထိုသေဆုံးသူ၏ ဝိညာဉ်သည် ဘဝတစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်း နိုင်ရန် နောက်ဆံတင်းစွာဖြင့် ရိဒ်ရေကန် သို့လာကြရပြီး ရေကန်သို့ ရောက်သောအခါမှ လုံးလိုသွေး (Longlotui) ခေါ် အတိတ်ဘဝ မေ့စေနိုင်သည့် စမ်းရေကြည်ကို သောက်ကာ ဟိုလ်လိုပါးရ် (Hoilopar) ခေါ် နောက်မလှည့်ပန်း ကို ပန်ဆင်ကြရသည်။ ထိုအခါ တွင်မှသေသူ၏ ဝိညာဉ်များမှာ အတိတ်ဘဝအား တမ်းတစိတ် များပျောက်ကွယ်ကာ ဘဝသစ်သို့ ကူးပြောင်း သွားနိုင်ရန် အတွက် ရေကန်ကြီး အတွင်းသို့ စိတ်ဖြောင့် လက်ဖြောင့် ဆင်းသွားနိုင်ကြသည်ဟု ယုံကြည်ထားကြည် ထားကြသည်။ အဆိုပါယုံကြည်မှု အရလည်း ချင်းလူမျိုး တို့မှာ ပွင့်လင်းရာသီရောက်တိုင်း ရိဒ်ရေကန်ကြီးသို့ လာရောက် လည်ပတ်ကာ ရက်လည် ၊ နှစ်လည်ပွဲကဲ့သို့သော နာရေးပွဲများကို ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ယင်းပွဲများတွင် ဘုန်းတော်ကြီးများက ရေကန်တွင်းမှကို လက်ခုပ်နှင့် ခပ်ကာ သရဇ္ဇယ် ကြလေ့ရှိပြီး ကန်အတွင်းသို့ ငွေအကြွေစများ နှင့်အမွှေးနံ့သာများ ပက်ကြဲကာ ရေကန်အနီးရှိ အရိပ်ကောင်းသော ညောင်ပင်ကြီးအောက်တွင် တရားပေးလေ့ရှိကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ကမ္ဘာအဝှမ်းတွင် ရှိရှိသမျှသော ရေကန်များအနက် အသည်းပုံစစ်စစ် ရှိသည့် တစ်ခုတည်းသော ရေကန်ဖြစ်သည်။ အမြင့်ပေ (၁၉၀၀) ကျော်သော တောင်တန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည့် ရေကန်လည်းဖြစ်သည်။ ထိုအချက်များထက် ပို၍ထူးခြားသည်မှာ ချင်းပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဖြစ်သော ဟားခါးတွင် အပူချိန် (ရေခဲမှတ်အောက်) အနှုတ် (၃) ဒီဂရီရောက်နေချိန်၌ ရိဒ်ရေကန်ကြီးအတွင်း ထူးခြားစွာ အနွေးဓာတ်ရရှိနေခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။ ထိုမှ တဖြန် အထူးခြားဆုံးဟု ဆိုရမည့်အချက်ကား ရိဒ်ရေကန်ကြီးအတွင်းသို့ ချောင်းရေ ၊ မြောင်းရေ လည်း စီးမဝင် ၊ မိုးလည်းမရွာသည့် ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်း နှင့် ဇန်နဝါရီ လဆန်းကဲ့သို့ ဆောင်းနှင်းထန်သည့် ကာလများတွင် ကန်ရေ ပြင်မှာ အလိုအလျောက် နောက်ကျိနေတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
↑ ဗန်းတဲ့ကျေးရွာ၏ ရိုးရာယျဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆိုင်၍ဖြစ်သော တရားမမှုစီရင်ရန် တီးတိန်မြို့နယ်တရားသူကြီးရုံး၊ ဖလမ်းခရိုင်တရားသူကြီးရုံး၊ ချင်းပြည်နယ်တရားသူကြီးရုံးနှင့် ဗဟိုတရားသူကြီးရုံး (အထက်မြန်မာပြည်-မန္တလေး) တို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ရိုးရာပရောဟိတ်ဆရာများအား အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုနှင့် စီရင်ဆုံးဖြတ်မှု အမှုတွဲမှတ်တမ်းများ (၁၉၉၇-၂၀၀၀)။
↑ Ngul L. Zam, B.A. Mualthum Kampau Guite Hausate Tangthu (History of Guite Chiefs the Sovereign of Three Mountain Region; Amazon/CreateSpace, United States, 2018), 44-46, ISBN 978-1721693559.
↑ Thang San Mung, “Sialkidul Li,” in Zolus Journal 17 (Yangon, Myanmar, 2013): 150-157.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရိဒ်ရေကန်&oldid=503562" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၄:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။